November 23, 2020 - Padaethar
23.11.2020 မှ 29.11.2020ထိ ( ၇ )ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်း
November 23, 2020 by Padaethar
( ၇ )ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ဗေဒင်ရွာ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဆရာအောင်ချစ်မင်းရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ၂၃.၁၁,၂၀၂၀ မှ ၂၉. ၁၁.၂၀၂၀အထိ တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း လာဘ်အထူးရွှင်နေ လိမ့်မည်။အလှူမင်္ဂလာနှင့် ပွဲလမ်းသဘင်တွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။နိုင်ငံခြာလူမျိုးနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်တွေ အကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်ခရီးတွေလည်း ကောင်းပါသည်။ထီး၊ဖိနပ်၊အထည်လိပ် လုပ်ငန်းတွေကတော့ တိုချဲ့သင့်သောလုပ်ငန်ူးတွေဖြစ်ပါသည်။မိတ်ရင်း ဆရာရင်းတွေနှင့်တော့ အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်သည်။ ပညာရေးကိစ္စ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာတော့ စိတ်ရှုပ်ရတတ်သည်။ရေလုပ်ငန်း အထူကောင်းမွန် အကျိုးပေးပါ လိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်ညစ်စရာလေးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေး ကြည်နူးဖွယ်ရာများ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။သင့်ကျန်းမာရေးကတော. အနည်းငယ်ဖျားနာတတ်သည်။သင့်အတွက်ကံကောင်စေသော အရောင်မှာအနီရောင် ဖြစ်ပါသည်။ သင် ထီထိုးမယ်ဆိုရင် ကံကောင်စေမည့် ဂဏန်း၅၆အတွဲဟာ သင့်အတွက် ကံကောင်းစေပါသည်။သင့်အတွက် ကံကောင်းစေရန် … Read more
ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတာတော့ “ရည်းစားထားတာ ယူဖို့လား” ဆိုတာ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်စရာပါပဲ
မယူခင် ရည်းစား နဲ့ အတူနေသင့်သလား ၊ မနေသင့်ဘူးလား…
ယခုလ ” ထီ “ကံကောင်းနေသော တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ထီကံဇာတာ အသင့်အသင့်ကောင်းတဲ့လဖြစ်နေပါတယ်။ ထီထိုးမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းသော်လည်းကောင်း စပ်တူသော်လည်းကောင်းအကျိုးပေးပါတယ်။ စပ်တူထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာ၊တနင်္ဂနွေသားသမီးနှင့်စပ်ပြီးထိုးပါ။ ဒီလအတွက် အကျိုးပေးတဲ့ဂဏန်းအနဲ့ကတော့ ၂ အစ ၁ အလယ် ၃ အဆုံးကိုထိုးပေးပါ။ အက္ခရာ အနေနှင့် က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င၊စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးရမည့်နေ့ကတော့ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေ့အတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ မုဆိုးရွှေအိုးရကိန်းအချိန်မှာ မနက် ၁၀:၄၉ မှ ၁:၁၂ မိနစ်အကြားမှာထီထိုးပေးပါ။ ကံကောင်းပါလိမ့်မည်။အရှေ့ မြောက်အရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ထီထိုးပါ။ ယတြာ အမွေးတိုင် (၁၁) တိုင်၊ ဆီမီး (၁၁) တိုင် လှူပြီးဆုတောင်းပါ။ ဒီလအတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးတိုင်း ကံကောင်းပါစေဟု ကျွန်ုပ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ unicode တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား အနဖွေငျ့ နိုဝငျဘာလမှာတော့ ထီကံဇာတာ … Read more
မိန်းကလေး တွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲတတ်ကြသလဲ။ ချစ်တော့ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော အခြေအနေတွေမှာ လက်လွှတ်လိုက်တာက ပိုကောင်းတယ်။ – အထီးကျန်လာရင် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူ ရှိနေပါလျက်နဲ့ အထီးကျန်နေတယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာ များလာတဲ့အခါ နေသားကျသွားတတ်ပြီး ရှိနေတဲ့ချစ်သူကိုလည်း မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်လာပါတယ်။ – အသိအမှတ်ပြုမခံရရင် အပြင်တွေဘာတွေသွားတဲ့အခါ လက်မကိုင်ဖြစ်တာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ရင် …. ကိုယ့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာ မခံရတာတွေဟာ ဝေးကွာခြင်းရဲ့ အစပါပဲ။ – ခန့်မှန်းရလွယ်နေရင် မိန်းကလေးတွေဟာ သံသယများတတ်တယ် ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ရှေ့ကို ကြိုမြင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ခန့်မှန်းနိုင်ကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်သူ ဘယ်အကွက်ရွှေ့နေတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းသိပါတယ်။ ငါ့ကောင်မလေးက ငါဘာလုပ်လုပ်မသိပါဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ …. ယောက်ျားလေးတွေဟာ ငတုံးတွေချည်းပါပဲ။ မိန်းကလေးတိုင်း … Read more
မှဲ့ ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အချစ်ရေး
မှဲ့ ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အချစ်ရေး ( ၁ ) “ပါး..ပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင်ချောနေ လန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြတတ်ဘူး။ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါရော… ( ၂ ) “နဖူး..ပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” သနားတတ်တဲ့စိတ် အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ်ယောက်ရတတ်တယ်။ အဲ့ချစ်သူက အနိုင်ယူတာ ခဏခဏငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာကြုံရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ချစ်သူကပဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိ ချစ်မယ့်သူ ဆိုတာမမေ့နဲ့…။ ( ၃ )“မျက်ခုံး..တစ်ဝိုက်က မှဲ့ပိုင်ရှင်” အချစ်စစ်ရဖို့ အချိန်တွေမနည်းရင်းရတတ်တယ်။ စန်းပွင့်ပြီး လူချစ်လူခင် ပေါတယ်။ အသေရရ အရှင်ရရ ချစ်ပြမယ့်သူတွေရှိလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အားကျရတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ … Read more
မိန်းကလေးများအတွက် ချစ်သူရဲ့ သဲသဲလှုပ် အချစ်ခံရစေမယ့် နည်းလမ်း ( ၅ )ချက်
သင့်ကို တန်ဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ချစ်တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ BrightSideကသင့်ချစ်ရတဲ့လူတွေလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်သိဖို့နည်း ၆နည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁။သင်ပြောတာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလိုနားထောင်တယ် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ပျေါ်စရာကော၊ဝမ်းနည်းစရာကောကိုနားထောင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်၊သူတို့ကနားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ…. သင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါတန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကိုပိုခိုင်မာပြီးရိုးသားမှုရှိလာအောင်လုပ်နေတာပါ။ ၂။သင့်ရဲ့အချွဲအနွဲ့တွေကိုကြိုက်တယ် သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာချွဲနွဲ့ရတာလဲဆက်ဆံရေးတခုမှာပျော်စရာပါပဲ။သင့်လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုချွဲရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကိုပိုကောင်းစေချင်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ အဲဒါတင်မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့အနောက်ကသိုင်းဖက်ခြင်းတွေကစကားလုံးတွေမပါဘဲသင်ကအရေးကြီးကြောင်းကိုပြနေတာပါ။ ၃။သင့်ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးတယ် ဆက်ဆံရေးတခုဆိုတာကသင်တို့အချိန်တွေထပ်တူကျတာမဟုတ်သလိုတနေကုန်စာပို့နေလို့လဲမရပါဘူး။နေ့တနေ့ကုန်သွားရင်မတူတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ရှင်သန်ကြတာပါ။ သင့်လက်တွဲဖော်ကအိမ်မက်တွေအောင်မြင်ဖို့တွန်းအားပေးပြီးသူ့ကိုအာရုံမစိုက်တာကိုအထွန့်မတက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါ။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်မှာလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာကိုနားလည်ခြင်းကရင့်ကျက်မှုနဲ့အချစ်စစ်ပါပဲ။ ၄။သင့်ကိုအိမ်မှာကူညီတယ် သင့်လက်တွဲဖော်ကအဝတ်လျှော်တာနဲ့တခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာမညည်းညူဘူးဆိုရင်သင့်ကိုတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သဘောထားပြီးမျှဝေခံစားတာပါ။ ဆက်ဆံရေးတခုမှာသာတူညီမျှစိတ်ရှိတဲ့သူကိုရှာဖို့အရမ်းခက်တဲ့အတွက်အဲလိုလူကိုတွေ့ရင်လက်မလွှတ်ပါနဲ့။ ၅။သူတို့ချစ်ရတဲ့တခြားလူတွေကိုသင့်အကြောင်းပြောဖို့ဝန်မလေးဘူး အရှင်းဆုံးလက္ခဏာကတော့သင့်လက်တွဲဖော်ကမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုသင့်အကြောင်းမဖုံးထားတာပါပဲ။သင်တို့ပတ်သတ်မှုအကြောင်း…. တခြားသူကိုပြောဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ကသင်နဲ့ထားတဲ့ကတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာနဲ့အနာဂတ်ကိုသင်နဲ့သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ၆။သင်တို့နှစ်ယောက်အပြင်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းလက်ချိတ်ထားတယ် လူကြားထဲမှာတောင်လက်ချိတ်သွားနေတာကလဲအဆင်ပြေပါတယ်။အဲဒါကိုအနီကတ်လို့သဘောထားရင်ရပါပြီ။သင်တို့နှစ်ယောက်ပတ်သတ်နေတယ်ဆိုတာ…. တခြားသူတွေကိုပြနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လူကြားထဲမှာတောင်သင်နဲ့ခပ်ခွာခွာမနေနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။Writer -Min Thu ( XYZ NEWS ) Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ သငျ့ကို တနျဖိုးထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုငျတဲ့ သငျ့လကျတှဲဖျောရဲ့အပွုအမူမြား ခဈြတယျလို့ပွောတာကတယောကျယောကျကိုဂရုစိုကျတယျဆိုတာပွောပွဖို့အလှယျဆုံးနညျးဖွဈပမေယျ့အဲဒီတနညျးပဲရှိတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ခံစားခကျြတှဖေျောပွတာကတယောကျနဲ့တယောကျမတူပါဘူး။တခြို့ကစကားလုံးတှသေုံးပွီးတခြို့ကအပွုအမူနဲ့ပွပါတယျ။ သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုလုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဒေါသထှကျစရာစိတျပကျြစရာတှလေဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ BrightSideကသငျ့ခဈြရတဲ့လူတှလေုပျပွတဲ့အပွုအမူတှကေဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာပွောစရာမလိုအောငျသိဖို့နညျး ၆နညျးကိုဖျောပွထားပါတယျ။ ၁။သငျပွောတာတှကေိုကိုယျပိုငျဒိုငျယာရီလိုနားထောငျတယျ သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ပွောတဲ့ပြျေါစရာကော၊ဝမျးနညျးစရာကောကိုနားထောငျပွီးနှဈသိမျ့ပေးတတျတယျဆိုရငျ၊သူတို့ကနားထောငျပေးရုံတငျမဟုတျဘဲ…. သငျ့တို့ဆကျဆံရေးရဲ့ယုံကွညျမှုကိုပါတနျဖိုးထားနတေယျလို့ပွတာပါ။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောဆကျဆံရေးကိုပိုခိုငျမာပွီးရိုးသားမှုရှိလာအောငျလုပျနတောပါ။ ၂။သငျ့ရဲ့အခြှဲအနှဲ့တှကေိုကွိုကျတယျ သငျခဈြမိသှားတဲ့အခါမှာခြှဲနှဲ့ရတာလဲဆကျဆံရေးတခုမှာပြျောစရာပါပဲ။သငျ့လကျတှဲဖျောကသငျ့ကိုခြှဲရတာကွိုကျတယျဆိုရငျသငျနဲ့ရှိနတေဲ့အခြိနျကိုပိုကောငျးစခေငျြပွီးတနျဖိုးထားတယျဆိုတဲ့သဘောပါ။ … Read more
ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး မိန့်ပြီ
ခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး_မိန့်ပြီ တိရစ္ဆာန်ဘုံသားတွေကို တို့များလူ့ဘုံက ကြောက်ရ လန့်ရပါတယ်။ ဟိုပိုးကြောက်ရ ဒီပိုးကြောက်ရ များလိုက်တဲ့ ပိုးကောင်တွေ။ အခုကြည့်လေ… အင်မတန်မှ အသိဉာဏ်ပညာကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ လူသားတွေက ဘာမှ ခန္ဓာကိုယ်အထည်ဒြပ်ရယ်လို့ ထင်ထင်ရှားရှားမရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ပိုးကောင်လေးကို ကြောက်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီပိုးကောင်လေးက သေရွာကို ပို့ပစ်နေတာ တစ်ပုံတပင်ကြီး ရှိနေပြီ။ဒုံးကျည်နဲ့လည်း ပစ်မရ။နျူကလီးယားနဲ့လည်း ဆော်မရ။ဘယ်လောက်များ ဒုက္ခများလိုက်ကြသလဲ။ အရေးပေါ်သုံးကြတဲ့ ဘုန်းကြီးများလည်း ကယ်မရ။ပရိတ်ကြီးလည်း ဘာမှလုပ်မရ။ တို့တောင် ကြောက်လို့ ပုန်းနေရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အားကိုးရာ။လူတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ပြုပြင်နေထိုင်သွားကြရမှာပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အတ္တ၊ မာနတွေ နည်းသည်ထက် နည်းအောင် ကျင့်ကြံယူကြရမှာပါ။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အတ္တ ၊မာနတွေ အားကောင်းလာလေလေ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ဖို့ မြန်လေလေပါ။ … Read more
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ မှာ (၇) ရက် သားသမီးများ ဘာဖြစ်မလဲ….
(၇) ရက် သားသမီးများအတွက် 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ မှာ ဘာဖြစ်မလဲ… တနင်္ဂနွေသားသမီးများ 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ မှာဘာဖြစ်မလဲ… ၂၀၂၁မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက အလုပ်တွေပြန်လည် ကောင်းမွန်လာမယ် ……။ ကြံစည်ထားတာတွေ အကောင်အထည် ဖော်လို့ရတယ်…..မိတ်ဆွေကောင်းတွေရမယ်….။ ထီကံကောင်းမယ် ….အချစ်ရေးစန်းပွင့်နေပါမည်။ သင့်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း share ( ရှဲလ် ) ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ…။ (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ အထူးတိုးတက်ရရှိကြပါစေ…။1875 baydin / ဗေဒင် တနင်္လာသားသမီးများ 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ မှာ ဘာဖြစ်မလဲ… ၂၀၂၁မှာ တနင်္လာသားသမီးတွေဟာ ငွေဝင်လာမယ်…..။ လဒ်ရွှင်မယ်…..အချစ်ရေးသာယာနေပါမယ်။ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ဦးမော့ လာပါလိမ့်မည် ။ ထီကံလည်း အကျိုးပေးနေပါမည်။ သင့်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း share ( ရှဲလ် ) ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ…။ … Read more